६७ वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा, पसलमा केके सामान पाइने? « News of Nepal
६७ वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा, पसलमा केके सामान पाइने?
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । दशैं सुरु हुन २५ दिन बाँकी हुँदा सरकारले ६७ वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । अझै ६ वटा पसल खुल्ने तयारीमा छ ।
प्रक्रियागत ढिलाईका कारण केही पसलहरु सञ्चालन प्रक्रियामा रहेको महानिर्देशक गौचनले बताए ।
साल्ट ट्रेडिङ्गका सुपथ मूल्य पसल हेर्ने सरोज नीधि तिवारीका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ्गले सञ्चालनमा ल्याउने ३ पसल खुल्न बाँकी छन् । सरकारले साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र दुग्ध विकास संस्थानले सञ्चालन गर्ने गरी देशभर ७३ वटा पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।